LIVE Kala hadal Kala iibsiga: Barcelona ayaa xiiseyneysa weeraryahanka Man City Aguero - TELES RELAY
LIVE Transfer Talk: Barcelona ayaa xiiseyneysa weeraryahanka Man City Aguero
The suuqa kala iibsiga ayaa furmay horaantii bishii Janaayo, iyo mala-awaalku wuxuu sii kululaanayaa heshiisyada suurtagalka ah. Halkan hoose ka daawo xanta ugu dambeysay, iyo halkan ka arag dhammaan heshiisyada rasmiga ah.
TOP SHEEKADA: Barcelona oo xiiseyneysa Aguero
Manchester City weeraryahanka Sergio Aguero wuxuu saaran yahay radar-ka Barcelona markii uu noqdo wakiil bilaash ah xagaaga soo socda, sida laga soo xigtay The Sun.
Aguero, oo 32 jir ah, ayaa ku jira lixdii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa City, walina ma uusan aqbalin heshiis cusub, taasoo la micno ah inuu xor u yahay inuu la hadlo kooxaha ka baxsan England.
Inkasta oo xilli ciyaareedkiisii ​​uu dhaawac soo gaadhay, haddana isagu waa mid ka mid ah weeraryahannada ugu fiican ee ku hareeraysan, Barcelona-na waxaa laga yaabaa inay raadiso beddel muddo gaaban ah. Lionel Messi haddii Argentina Xiddiga heerka caalami ayaa raacaya hanjabaadiisii ​​inuu ka tagayo Camp Nou marka qandaraaskiisa uu dhacayo 2021.
Mushaarka uu qaato Aguero £ 240k-usbuucii ayaa caqabad ku noqon kara, halka PSG ay iyaduna xiiso u muujisay. Weeraryahanku wuxuu had iyo jeer sheegaa inuu doonayo inuu ku laabto kooxda reer Argentine ee Independiente si uu u soo afjaro waayihiisa ciyaareed laakiin waxaa laga yaabaa inuu sannado kooban uga harsan yahay hogaanka Yurub.
- Ku Wareeji ESPN FC Maalin kasta ESPN + (Mareykanka oo keliya)
- Tilmaamaha daawadayaasha ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup iyo inbadan
22.30 GMT: Taasi waxay u sameyn doontaa daabacaaddii ugu dambeysay ee blog-keena LIVE Transfer Talk. Waxaan rajeynaynay inaad sifiican ulasocodtay inaad nalasocoto waxaanan ku xasuusinay inaad si dhakhso ah dib ugulasocoto wararkii ugu dambeeyay ee xanta suuqa kala iibsiga, warbixino iyo heshiisyo dhameystiran. Habeen wanaagsan!
22.04 GMT: Danny Rose 'mare Riyada Jose Mourinho ayaa laga yaabaa inay ku dhowdahay dhamaadka, sida laga soo xigtay hal ilo.
Taasi waa sababta oo ah Tottenham ayaa kansali karta qandaraaskii hore ee bidix ee England. Khabiirka suuqa kala iibsiga ee talkSPORT Alex Crook ayaa qaba. 30 jirkaan ayaa laga xayuubiyey tababaraha reer Portugal waxaana laga reebay kooxda Tottenham ee Premier League iyo Europa League.
Crook ayaa xitaa u magacaabay West Brom koox macquul ah inay xiiseyneyso 30 jirkaan.
“Waxaa la ii sheegay inay jirto fursad weyn oo uu ku raaci karo Jack Wilshere taasoo la micno ah in Tottenham ay kansali karto qandaraaskiisa daaqadan.
“Waan ognahay inuusan qeyb ka aheyn qorshayaasha Jose Mourinho.
“West Brom iyo Sam Allardyce aad ayey u jeclaan lahaayeen inay geeyaan Hawthorns - hadii uu u arko inay tahay kooxda saxda ah ee soo nooleyneysa xirfadiisa, ma garanayo. "
21.22 GMT: Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Tottenham Jack Clarke ayaa qarka u saaran inuu amaah ugu biiro kooxda Stoke Sky Sports News ayaa fahansan.
20 jirkaan oo kaliya seddex kulan u saftay Spurs tan iyo markii uu ka soo iibsaday Leeds bishii July 2019, ayaa xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay kulankii Championship ee u dhexeeyay Leeds iyo QPR. Waxaa loo saxiixay 10 milyan oo ginni oo Spurs ah, saacaddu waxay kusii jeedaa waqtigii Clarke ee kooxda.
20.39 GMT: West Ham € 5 million ayaa gaabinaysa dalabkeedii bedelka Sebastian Haller?
Kanaalka Telefoot, iyada oo loo marayo TEAMtalk, sheegashooyinka in Hammers ay miiska u saartay Re 10m dalab ay ku dooneyso weeraryahanka Reims Boulaye Dia laakiin in kooxda reer France ay ku rabto ene 15m oo reer Senegal ah. Lyon 1 ayaa ah gooldhaliyaha ugu sareeya xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 12 gool, 24 jirkaan Dia ayaa soo jiitay kooxo ka dhisan England iyo kuwa ka baxsan.
19.42 GMT: AC Milan ayaa ka mid ah afarta koox ee isha ku heysa xiddigga Bayern Munich Leon dajaku, Goal iyo Spox waa soo sheegi karaan.
Union Berlin, Nice iyo Cologne ayaa sidoo kale raacaya 19 jirkaan weerarka ka ciyaara kaasoo seddex kulan u saftay kooxda koowaad ee Bayern. Dhamaan afarta kooxood ayaa isha ku haya heshiis amaah ah oo ay ku dooran karaan weeraryahankooda kaas oo inta badan u ciyaaray kooxda kaydka ah ee Bayern tan iyo markii uu kaga soo biiray Stuttgart sanadkii 2019.
18.57 GMT: The San Jose Earthquakes waxay sii wadaa inay horumar ka sameyso Chivas oo ku saabsan wareejinta qadka dhexe ee weerarka Javier " Chofis »Lopez, ilo ayaa u sheegaya ESPN Mexico.
Tababarihii hore ee Chivas Matias Almeyda ayaa aad u daneynaya inuu la midoobo laacibka reer Mexico, kaasoo uu soo tababaray intii u dhaxeysay 2015-18, waxaana lagu soo waramayaa in heshiiska uu ku dhow yahay. 26 jirkaan, oo dhaliyay 21 gool isla markaana ku daray 12 caawin 185 kulan oo uu ciyaaray Chivas, wuxuu noqon doonaa ciyaaryahankii seddexaad ee Chivas ee ku biira Almeyda 'Quakes ka dib Carlos Fierro iyo Oswaldo Alanis.
18.14 GMT: Man City ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro ciyaaryahanka aadka loo qiimeeyo ee qadka dhexe Sassuolo Manuel Locatelli.
Daily Mail ayaa qortay in City ay soo xushay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Talyaani, kaasoo loo arko inuu yahay mid ka mid ah khadka dhexe daafaca ee ugu fiican Serie A. 23 jirkaan, oo ka soo dhex muuqday safka AC Milan, waxaa loo arkaa bedelka muddada dheer ee 35-. Fernandinho oo qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Juventus ayaa sidoo kale isha ku heysa ciyaaryahanka khadka dhexe, kaasoo lagu qiimeeyo Transfermarkt aduun dhan 35 milyan oo euro.
17.32 GMT: Lyon ayaa ganacsi xoog leh ka heshay khadka caawa, kooxda ayaa ku dhawaaqday inay iibisay weeraryahankeeda Moussa Dembele kuna aadan Atletico Madrid waxaana lagu beddelay nin safka hore uga ciyaara Algeria Islam Slimani.
Heshiiska Olympique Lyonnais ee amaahda @ MDembele_10 ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
- Atlético de Madrid (@atletienglish) January 13, 2021
Ku soo dhowow OL, Islam Slimani! 🔴🔵# Slimani2022 pic.twitter.com/FqltFPycSK
- Olympique Lyonnais @ (@OL_Soomaali) January 13, 2021
24 jirkaan Dembele, oo dhaliyay 20 gool mid kasta oo ka mid ah labadiisa xilli ciyaareed oo buuxa Lyon, ayaa ku biiraya Atleti markii hore amaah si uu ugu bedelo Diego Costa, iyadoo kooxda reer Spain ay sidoo kale haysato ikhtiyaar iibsi ah oo gaaraya .33.5 32 milyan. Dhanka kale, Lyon waqti kuma luminin inay ku bedesho tababaraha reer France, waxayna lasoo saxiixatay halyeeyga reer Algeria Slimani oo katirsan kooxda Leicester City. 18 jirkaan oo amaah kusoo qaatay Newcastle, Fenerbahce iyo Monaco sanadihii ugu dambeeyay, ayaa dhaliyay sagaal gool 1 kulan oo uu saftay Ligue XNUMX xilli ciyaareedkii hore. The Monegasques.
16.51 GMT: U dhaqaaqista Real Madrid ee Eden Hazard ma shaqeyn.
Sid Lowe ayaa sheegay inuusan xasuusan karin hal qaab ciyaareed wanaagsan oo ka yimid Eden Hazard intii uu joogay Real Madrid.
16.00 GMT: Waqtigu wuu is gurayaa Neymar si loo caddeeyo inuu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan jiilkiisa, ayuu qoray Tim Vickery.
Neymar toddobaadyo yar gudahood ayuu noqonayaa 29 jir. Waa inuu noqdaa halka ugu sarreysa madaama uu galayo labo sano oo muhiim ah xirfadiisa ciyaareed, isagoo ka bilaabaya inuu ruxo dhaawicii ugu dambeeyay wuxuuna ku dhamaadaa Koobka Aduunka 2022 iyo, rajada Brazil inay saaran tahay garbihiisa, horyaal lixaad
Labadan sano wax badan ayey qaban doonaan si ay u xaqiijiyaan booskiisa ciyaarta, inkasta oo ku guuleysiga Koobka Adduunka iyo Champions League aysan ahayn ujeeddada kaliya. Xilligii Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa soo dhowaanaya. Kursiga ciyaaryahanka adduunka ugu fiican ayaa loo tartamayaa iyadoo Robert Lewandowski ay u badan tahay inuusan noqon doonin musharax muddo dheer ah oo 32 jir ah. Tillaabooyinka qaar, oo xaqiiqdii oo ay ku jiraan tiisa, xirfadiisa Neymar ayaa gaabin doonta hadii uu awoodi waayo inuu sheegto sharaftiisa.
Qaarkood hubaal (oo la fahmi karo) waxay u arki doonaan tan buunbuunin, dabin nacas ah oo fiiro gaar ah u leh abaalmarin shaqsiyeed oo shaqsi ahaaneed koox koox. Laakiin Neymar waa reer Brazil sidaa darteed, wuxuu ku soo barbaaray fikradda abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican sida wax dhalasho qaran ah. Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka: waxay umuuqatay in la siiyay in laacibka reer Brazil ee aadka uwanaagsan sidoo kale loo arki doono kan ugu fiican aduunka.
15.40 GMT: Bayer Leverkusen ayaa la soo wareegtay Timothy Fosu-Mensah ka soo qaadatay Manchester United aduun dhan £ 1.5m heshiis seddex sano ah.
WARARKA LAGU WAREEJIYO 🚨
Timothy Fosu-Mensah ayaa ugu biiray Bayer 04 kooxda Manchester United.
Ku soo dhowow Werkself, Timothy! pic.twitter.com/L8amR13jxJ
- Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 13, 2021
15.23 GMT: Khadka dhexe ee kooxda Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus waxaa qandaraaskiisa lagu burburin karaa 40 milyan oo ginni ah oo la dhaqaajin karo illaa dhammaadka bisha May, Sport Bild warar
Mid ka mid ah xiddigaha soo kacaya ee horyaalka, 23 jirkaan reer Jarmal ayaa gacan ka geystay guuldaradii ka soo gaartay Bayern Munich jimcihii la soo dhaafay markii uu dhaliyay goolka guusha ee Gladbach ciyaar 3-2 ku badisay.
Neuhaus ayaa lala xiriirinayay inuu u wareegayo Bayern waagii hore, halka Real Madrid, Inter iyo AC Milan sidoo kale lagu soo waramayo inay isha ku hayaan horumarka ciyaaryahanka khadka dhexe.
14.45 GMT: Weeraryahanka Arsenal Folarin Balogun ayaa ogolaaday inuu u saxiixo RB Leipzig xagaaga, ayay sheeganeysaa Kubadda cagta.
Balogun, oo 19 jir ah, ayaa si aad ah loogu qiimeeyaa Emirates laakiin ma uusan u jabin kooxda koowaad gabi ahaanba qandaraaskiisuna wuxuu dhacayaa xagaaga.
Xiddiga reer England ee U20 ayaan wali ciyaarin kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Premier League laakiin waxa ay indhaha ku qabteen labo gool oo uu ka dhaliyay Europa League.
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa shaaca ka qaaday sanadkii la soo dhaafay inuu ku rajo weyn yahay kordhinta qandaraaska Balogun, laakiin waxa ay u muuqataa in ciyaaryahan kale oo da 'yar uu ku sii jeedo Bundesliga Jarmalka.
14.20 GMT: Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay aqbashay dalab 5 milyan oo ginni ah oo uga yimid Barcelona Eric Garcia, taas oo u arki lahayd inuu dhaqaaqo bisha Janaayo, ayaa leh Mundo Deportivo.
Garcia, oo 20 jir ah, ayaa sheegay inuusan qandaraas cusub u saxiixi doonin City qandaraaska daafaca ee haatan ayaa dhacaya xagaaga 2021.
City ayaa heysay 20 milyan ginni xagaagii, laakiin labada naadi wax heshiis ah ma gaarin, waxaana haatan hoos u dhac weyn ku yimid qiimihii la weydiinayay ciyaaryahanka reer Spain kaasoo bilaash ku dhaqaaqi kara lix bilood ka dib
Kooxo kale oo sar sare ayaa xiiseynayay, laakiin Garcia wuxuu marwalba doonayay inuu ku laabto kooxdiisii ​​hore ee Barcelona, ​​iyadoo City lagu wado inay hesho 5 milyan oo kale oo dheeri ah oo dheeri ah. Heshiiska ayaa kaliya u baahan inuu saxiixo madaxweynaha cusub wixii ka dambeeya Jan. 24 - ama dhammaan musharrixiinta waa inay oggolaadaan saxiixa waa la sameyn karaa iyadoo la tixgelinayo duruufaha gaarka ah…
13.55 GMT: Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa ereyo door ah ku lahaa qadka dhexe ee kooxda Arsenal Mesut Ozil shalay
Jose Mourinho ayaa aad u xiiseynaya xiddiga Arsenal Mesut Ozil ka dib markii uu sheegay inuu doorbidayo inuu ka fariisto halkii uu u saxiixi lahaa Tottenham.
13.26 GMT: Sky Sports ayaa sheegeysa in Nice laga yaabo inay amaah ku siiso ciyaaryahan kale oo Premier League ah - iyadoo horayba ula soo wareegtay William Saliba ka yimid Arsenal.
Warbixinta ayaa aqrisay" Jesse LingardWakiiladu waxay wadahadal bilow ah la yeesheen Nice oo ku aadan amaah. Hab rasmi ah ayaa la filayaa toddobaadka soo socda. Manchester United weli ma go’aansan inay u ogolaato Lingard inuu baxo iyo inkale. "
13.14 GMT: Bournemouth ayaa lagu wadaa inay saxiixdo Jack Wilshere.
Wilshere, oo 29 jir ah, ayaa tababar la qaadanayay kooxda tan iyo markii ay iska fasaxday West Ham xagaagii iyadoo xiddigii hore ee khadka dhexe ee Arsenal uu amaah ugu soo ciyaaray xeebta koonfurta 2016-17.
“Runtii wuxuu ku raaxeysanayaa waqtigiisa halkaan marka waa inaan wadahadal yeelannaa usbuuca soo socda ama wax lamid ah,” Maamulaha Bournemouth Jason Tindall ayaa yiri. Markasta oo aad lasocto ciyaaryahan tababarka tayada Jack ah, waxay noqon doontaa doqonimo inaad dhahdo ma jirto fursad aad rabto inaad wax kuqabato. "
12.52 GMT: Borussia Dortmund ayaa diyaarinaysa liis ay ku buuxin karto xiddiga garabka ka ciyaara Jadon Sancho, haddii uu kooxda ka tago bilaha soo socda.
Sancho ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu 120 milyan ginni ugu dhaqaaqayo Man United, Dortmund ayaana isha ku heysa VfB Stuttgart Tanguy Coulibaly, sida laga soo xigtay France Football.
Coulibaly, oo 19 jir ah, ayaa kaliya Stuttgart kaga soo biiray PSG si bilaash ah sanadka 2019 wuxuuna leeyahay laba gool 14 kulan oo Bundesliga ah oo uu u ciyaaray kooxda.
12.15 GMT: Moussa Dembele ayaa heshiis amaah ah ugu wareegaya Atletico Madrid kooxda Lyon waxaana kooxda reer France ay heshay bedelkiisa.
Ayuu yiri Fabrizio Romano Weeraryahanka Leicester Islam Slimani ayaa hada dhamaystay tijaabada caafimaad waxaana lagu dhawaaqi doonaa dhawaan.
11.34 GMT: Julien Laurens ayaa sharxaya sida ay PSG u qorsheyneyso inay ku soo jiidato xiddiga Barcelona Lionel Messi inaad ku biirto Neymar iyo Kylian Mbappe.
Tan iyo markii uu iibsaday kooxda Faransiiska xagaagii 2011, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani wuxuu had iyo jeer lahaa riyo: inuu midkood Cristiano Ronaldo ama Messi keeno Parc des Princes. Marar badan ayuu isku dayay, laakiin waligiis ma noqon. Si kastaba ha noqotee, wuu ogyahay in markan, maskaxda Messi ay aad u furan tahay oo rabitaanka iyo go'aaminta in la isku daro qorshe la isku dayo in la keeno Paris ayaa aad u badan.
Messi ayaa ka sareeya Pele, Ronaldo oo ah ciyaaryahanka abid ugu goolasha badan hal koox Kabtanka Barcelona weli ma uusan go’aansan waxa uu sameyn doono xagaaga. Waxa uu awoodi doonaa inuu ka tago Camp Nou si aan ka duwaneyn xagaagii hore, markii uu isku dayay inuu qasbo bixitaankiisa inkastoo uu weli qandaraas kula jiro. Markan, way ka duwanaan doontaa.
Miyuu runtii ku dhammeyn doonaa sheekadiisa jacaylka ah ee 20-ka sano magaalada iyo naadiga wax walba siisay? Qaarkood waxay aaminsan yihiin in fowdadii ka jirtay kooxda sanadihii la soo dhaafay awgood, natiijooyinka xun iyo jihada la'aanta darteed, inuu xaqiiqdii doonayo inuu baxo. Qaar kale waxay aamminsan yihiin gudaha gudihiisa, inuu kaliya doonayo inuu joogo oo uu xirfadiisa cajiibka ah ku dhammeysto Barcelona haddii uu ku qanco in xaaladuhu ay jiraan (madaxweynaha cusub, koox ka fiican, Xavi oo ku lug leh xoogaa awood ah) inuu guuleysto, wuu sii joogi lahaa.
Laakiin haddii uu Messi baxo, PSG dhab ahaantii ma shaqaaleysiin kartaa xagaagan? Dabcan. Ma macquulbaa mise waa macquul? Taasi waa mid aan la hubin. Mudnaanta magaalada Paris ayaa ah in la kordhiyo heshiisyada Neymar iyo Kylian Mbappé. Labadooduba waxay dhacayaan Juun 2022, qandaraasyada muddada-dheer ee labada weeraryahanna waxay la macno tahay in la sii wado dhisidda koox aad u tartameysa hareerahooda, iyo sidoo kale in la hubiyo qiimahooda haddii ay doonayaan inay ka baxaan mustaqbalka.
10.59 GMT: Ole Gunnar Solskjaer ayaa yiri Paul Pogba waa "heerkiisii ​​ugu fiicnaa" ka dib goolkii khadka dhexe ee uu ka dhaliyay Burnley uu u diray Manchester United hogaanka Premier League.
Xiddiga reer France ayaa dhaliyay gool qurux badan oo ay ku dheeleyso inay United 1-0 kaga badiso Turf Moor isla markaana uu u xaqiijiyo kooxda Solskjaer inay wajahaan axada kulanka muhimka ah ee ay la leeyihiin kooxda heysata horyaalka Liverpool seddex dhibcood oo nadiif ah.
Waxaan had iyo jeer dhihi jiray Paul waa ciyaaryahan weyn noo, ” Ayuu yidhi Solskjaer. Waa dabeecad wanaagsan qolka labiska, marwalba waa kan ay wiilashu fiiriyaan waana horyaal caalami ah dabcan, waxaana qabaa inuu joogo waqtigiisii ​​ugu fiicnaa waqtigan. "
Waa markii ugu horreysay ee United ay hoggaanka u qabato Premier League bishii Janaayo tan iyo 2013, markaasoo kooxda Sir Alex Ferguson ay ku guuleysteen horyaalnimada, guushii ay ka gaareen Burnley ayaa u diyaarisay safar afka ah garoonka Anfield Axadda.
10.22 GMT: Erling Haaland wuxuu heli karaa kooxo uu doorto marka uu doonayo inuu ka tago Borussia Dortmund, laakiin xagee buu aadayaa?
Kasey Keller iyo Steve Cherundolo ayaa isku raacay liiska weeraryahanada ka horeeya Erling Haaland inay si dhakhso leh u sii yaraanayaan.
09.41 GMT: AC Milan waxaa ka go’an inay sii haysato khadka dhexe Brahim Diaz ka baxsan heshiiskiisa amaahda, ayuu yidhi Marca.
Diaz, 21, ayaa ku soo biiray Rossoneri amaah hal xilli ciyaareed ah uga yimid Real Madrid xagaagii waxaana uu dhaliyay afar gool seddex kalena wuu dhigay 22 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan tan iyo markaas.
Isaga oo maamulay kaliya 21 kulan, lix bilow ah Real Madrid tan iyo markii uu kooxda uga soo biiray Manchester City bishii Janaayo 2019 lacag ka badan 15 milyan oo ginni, Diaz ayaa lagu soo waramayaa inuu u furan yahay inuu sii joogo Milan wixii ka dambeeya xagaagan.
Whit Uma jeedin inay sii daayaan Diaz si joogto ah, laakiin waxay u furan yihiin inay kordhiyaan amaahda uu ku sii joogayo San Siro xilli ciyaareed kale.
09.09 GMT: Luka JovicAmaahda ayaa ka soo guurtay Real Madrid ilaa Eintracht Frankfurt ayaa lagu wadaa in maanta si rasmi ah loo sameeyo.
Agaasimaha isboortiga Eintracht Frankfurt Fredi Bobic ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay qarka u saaran tahay inay heshiis amaah ah kula soo wareegto Jovic inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan.
“Luka Jovic wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxdeena ilaa xagaaga,” Bobic ayaa yiri. “Weli waxaa jira faahfaahino kooban oo la kala saarayo, oo ay ku jiraan caafimaadka. Laakiin haddii wax walboo hagaagaan, mar dhow ayuu nala joogi doonaa. "
The Serbia caalamiga ayaa ku laaban doona kooxda Bundesliga amaah lix bilood ah iyada oo aan wax iibsi ah lagu darin heshiiska. Jovic, oo u saxiixay Madrid qandaraas lix sano ah ka dib markii uu ugu dhaqaaqay kooxda reer Spain heshiis lagu sheegay 60 milyan oo ginni xagaagii 2019, ayaa waqti yar ku qaatay inuu la ciyaaro Los Blancos.
23 jirkaan ayaa dhaliyay labo gool shan kulan uu saftay tartamada oo dhan Madrid xilli ciyaareedkan. Ma uusan u safrin kooxda Malaga kulanka Spanish Supercopa ee semi-finalka Khamiista Athletic Bilbao, isagoo hore u seegay kulankii ay barbaraha goolal la’aanta ah la galeen Madrid Osasuna Sabtiga.
Jovic ayaa wacdaro ka dhigay Eintracht isagoo dhaliyay 27 gool intii lagu jiray ololihii 2018-19 taas oo keentay in Madrid ay hesho xagaagaas.
08.30 GMT: Horyaalka Bundesliga ee Ingiriiska ayaa kordhin kara xagaagan, iyadoo Bayern Munich lala xiriirinayo dhaqaaq Reading difaac Cumar Richards. 22 jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga iyo, sida uu sheegay The Guardian, wuxuu heshiis seddex sano ah la gaari doonaa kooxda heysata horyaalka Jarmalka iyo Yurub. Ciyaaryahankii hore ee xulka England U21 ayaa siin doona tartan dooqa koowaad ee daafaca bidix Alphonso Davies. ExChelsea khadka dhexe Jamaal Musiala sidoo kale wuxuu joogaa Bayern.
Kasey Keller ayaa su’aal ka keenaya haddii difaaca Bayern uu ku habboon yahay inuu ciyaaro saf sare ka dib markii uu ka tanaasulay 24 gool 15 kulan oo uu ciyaaray.
Bayern ayaa weli dooneysa Hudson-Odoi
Bayern Munich wali waxay xiiseynayaan isku dayga saxiixa Chelsea xiddiga Callum Hudson-Odoi, wargayska Daily Mail.
Da 'yarka ayaa saxiixay qandaraas cusub oo lagu sii hayn doono Stamford Bridge ilaa 2024, laakiin warbixinta ayaa tilmaameysa in Bayern aan laga tuurin caraftiisa isla markaana ay isha ku hayaan inta kulan ee uu ku hoos ciyaarayo Frank Lampard xilli ciyaareedkan.
Xagaagii lasoo dhaafay Chelsea ayaa diiday dalab amaah ah oo lagu daray £ 70 milyan oo dooq ah oo ay ka iibsatay kooxda heysata horyaalka Jarmalka, taasoo fikrad ka bixinaysa inta ay Bayern bixinayso si ay u xaqiijiso saxiixiisa.
Arsenal ayaa qarka u saaran inay riixdo Solomon
The Guardian-ka waxaa uu sheegay in Arsenal ayaa rajeynaya inay dalab u diraan Shakhtar Donetsk's Manor Sulaymaan xagaagan.
Gunners ayaa durbaba sameysay dhaqdhaqaaqyo dhowr ah intii lagu jiray suuqa kala iibsiga bisha Janaayo iyadoo la aaminsan yahay in tababare Mikel Arteta uu sameyn doono isbedel jumlo ah inta lagu guda jiro daaqadaha soo socda
Ka dib qaab ciyaareedyo xoog leh oo uu soo bandhigay UEFA Champions League, Solomon ayaa u soo muuqday mid ka mid ah ragga ugu muhiimsan ee ay Arsenal isha ku heyso.
Wolves ayaa soo afjartay xiisihii Origi & Giroud
Wolverhampton Wanderers hadda ka dib raadineynin heshiisyo Divock Origi or Olivier Giroud, Daily Mirror ayaa warinaysa.
Ka dib markii Raul JimenezDhaawaca madaxa ka soo gaaray wuxuu u muuqday sidii Nuno Espirito Santo uu ugu biirayo suuqa kala iibsiga weeraryahan cusub, laakiin ka dib markii aan dib u xusuustay Patrick Cutrone ka Fiorentina, taasi uma muuqato mar dambe kiiska.
Nuno ayaa la sheegay inuu ugaarsi ugu jiro ciyaaryahanka kooxda Chelsea Giroud ama Liverpool'Origi, laakiin taa badalkeeda, waxaa loo sheegay inuu isticmaalo ilaha uu haysto maadaama kooxda yar ee Wolves ay wali halgameyso.
- Daily Mail ayaa tabinaysa in Arsenal iyo Chelsea ay yihiin labada koox ee ka fiirsanaya inay u dhaqaaqaan Bursaspor dareen Cali Akman. 18 jirkaan ayaa horey u dhaliyay sagaal gool 16 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkaan Turkiga, iyo halka Galatasaray iyo FC Salzburg waxay isku dayeen inay soo bandhigaan dalab bishii Diseembar, awood la'aanta inay la soo saxiixdaan waxay albaabka u fureysaa dadka ugu caansan Yurub inay tijaabiyaan biyaha.
- Celtic ku biirey Rangers tartanka saxiixa Wigan Athletic xiddig Kyle joseph, Daily Mirror ayaa warinaysa. Iyadoo Latics ay ku jiraan xaalad dhaqaale oo adag waxay u muuqataa inay u muuqato in ciyaartoydooda ugu sareysa ay ku dhamaan karaan goor dhow iyo goor dambe, iyadoo Joseph uu diyaar u yahay labada koox ee reer Scotland heshiis hor dhac ah xagaagan. Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale xiiseynaya ciyaaryahanka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore (Ingiriis) http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/4286599/live-transfer-talk-barcelona-interested-in-man-city-striker-aguero
Falanqaynta Buuxda ee Codbixinta Aqalka ee Xilka qaadista Madaxweyne Trump - New York Times
#Stromae, martida gaarka ah ee C'Midi (May 22, 2015) - Video